गर्भवती भए-नभएको कुरा घरमै जाँच्न सकिँदैन ? - Indian Girls Nude XXX Images
१९ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ । केही अघिदेखि नै महिना-दुई महिनामा एक-दुई पटक मेरो एकजना केटा साथीसँग यौनसम्पर्क हुने गरेको थियो । हामीले परिवार नियोजनका कुनै साधन प्रयोग गरेका थिएनौं, तर वीर्य बाहिर फ्याँक्ने गरेका थियौं । गत महिना मैले महिनावारी रोक्ने औषधि प्रयोग गरेको थिएँ, त्यही बेला हामीबीच सम्पर्क भयो र भोलिपल्टै महिनावारी भयो । तै पनि मैले थप २ दिन औषधि प्रयोग गरें । यो महिना मेरो महिनावारी भएको छैन । कतै म गर्भवती त भइनँ ? गर्भवती भए-नभएको कुरा घरमै जाँच्न सकिँदैन ? महिनावारी भएका बेला यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ कि रहँदैन ?
गर्भ नचाहिएको अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्नुपर्ने भए परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । यौनसम्पर्क गर्दा वीर्य योनिमा नभै बाहिर फ्याँक्नु पनि परिवार नियोजनको प्राकृतिक विधि हो, तर यो विधिमा पूर्ण निर्भर हुन भने सकिँदैन । तपाईंले महिनावारी रोक्ने कुन औषधि खानुभयो ? तपाईंले कसको सल्लाहमा कति दिन औषधि खानुभयो ? प्रश्नमा स्पष्ट छैन । तपाईंको महिनावारी रोकिएको कारण त्यही औषधि पनि हुन सक्छ । यदि तपाईंले महिनावारी रोक्न प्रोजेस्ट्रोन भएको औषधि प्रयोग गरेको हो भने गर्भ रहने सम्भावना न्यून छ । तपाईं गर्भवती भए-नभएको प्रिग्नेन्सीकिटको मद्दतले घरमै परीक्षण गर्न सकिन्छ । सामान्यत: महिनावारी भैरहेको समयमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहँदैन, तर यस्तो अवस्थामा यौनसम्पर्क गर्नु राम्रो होइन । यस्तो अवस्थामा सम्पर्क गर्दा पाठेघरको संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)	December 10, 2014 admin	Posted in Most Demanded, Nepali SEX Stories	Post Permalink
← मैले हातले गुप्त अंग चलाउँदा सेतो पदार्थ निस्किन्छ र रातो हुने अनि पोल्ने पनि हुन्छ । अब मैले के गर्नुपर्ला ?	म र मेरो ब्वाइफ्रेन्ड मिलेर विवाहअघि यौनसम्पर्क-गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ? →